Hal Qarni Ayaa U Dhaxeya Labada Magac Ee Soomaaliya Lagula Diriray Ee Kala Ah MAADH MULLAH & ARGAGIXISO. - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Hal Qarni Ayaa U Dhaxeya Labada Magac Ee Soomaaliya Lagula Diriray Ee Kala Ah MAADH MULLAH & ARGAGIXISO.
Hogaamiye yaashii dagaalkii ay dowladaha reer galbeedku lagaleen Daraawiishtii Soomaaliyeed waxaa kamid ahaa ninkii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Koofil ee hogaaminaayey ciidamo madoow oo isugu jira Soomaali iyo Afrikaan kaleba iyo saraakiil caddaan ah.
Waa caadi meelaha uu gumeysigu ka jiro wax yaabaha lagu garto waxaa kamid ah inay ciidamo calooshood u shaqeystayaal dabadhilifyo ah qortaan si ay ugu fushadaan howlahooda iyo ujeedooyinkooda boobka iyo sad bursiga kudhisan. waxaana caadi ah inaad aragto saraakiil caddaan ah oo horboodeyso ciidamo loo adeegsanaayo dadkooda iyo dalkooda hooyo ayagoo udhimanaayo mushaar ku eg inta ay nool yihiin.
Haddaba waqtigaas Mr. koofil oo hogaaminaaya niman Soomaaali ah oo ku hubeysan qoryo iyo rasaas Ingiriis ah ayaa weeraro aan tira lahayn ku qaadi jiray magaalooyin iyo tuulooyin lagu tuhmaayo inay Daraawiishtu joogto ama lagu soo dhoweeyo oo lagu taageero.
Wuxuuna halkaas kageysan jiray xasuuq iyo boob aan loo xad deyeynin asagoo isticmaalaya ciidamo Soomaali ah oo ay soo aruuriyeen kuwo uu kursi kasiiyey dalkooda hooyo.
Ciidamadaas waxaa laga dhaadhiciyey inay ladagaalayaan Wadaad Waalan oo ay ula jeedaan Sayid Maxamed Cabdulle Xassan, qaarkood waxaa loo tusiyey inuu wadaadku doonaayo inuu dumiyo saldanada reerkooda, uuna diidan yahay horumarkooda.
Hadda boqol sano kadib, waxaa meeshii ka bilowday dagaalkii waagaas qaboobay laakiin aan dhammaanin weligiisna aan dhammaan doonin.
Shalay wuxuu ka bilowday wax ka yar shan Shilin ama hal Poun, oo canshuur ah, laakiin huwan qab iyo qiimo qaran. maantase wuxuu ka bilowday dad Soomaali ah oo leh maamulkii gumaystaha ayaan rabnaa ee hanaloo soo celiyo, hana naloo qeybiyo sidii ay shalay inoo qeybsadeen.
Waa laga yeelay waxaana loo sameeyey qorshihii dagaalka lagu geli lahaa oo loo bixiyey ladagaalanka Argagixisada.
Waxaana madax looga dhigay jiilkii seddexaad ee Mr. Koofil oo aad ula socda meesha uu maraayey qorshihii waagii fashilmay ee awoowgood lagu dilay. wuxuu xasuustaa inay Soomaalidu tahay dadkii ugu horeeyey ee afrikaan ah ee dayuurado lagu weeraro. Wuxuu kadheregsan yahay inaysan Soomaalidu ahayn dad sahal wax looga qaadi karo haddii aan la helin kuwo kursi doon ah sida kuwii waagii hore awoowgii caawiyey.
Waa lahubaa meesha uu dagaalkani kudambayn doono, laakiin lama oga inta uu qaadan doono. waxaase layaab leh in gobollo aan awel lagu aqoon inay gumaysiga soo dhoweeyaan ay maanta ucaaboon yihiin sidii ay gacansaar ula yeelan lahaayeen , taasoo xoogaa dheereysay dagaalka.
Waxaa laga yaabaa inay Soomaalida maantana noqotay dadkii ugu horeeyey ee afrikaan ah ee DRONIS lagula dagaalay. ama weeraradii ugu badnaa lagu fuliyey.
Ugu dambeyn waxaan Soomaalida leeyahay, WAA LA DOOGSANIYE YAAN LA DACAROON.
WQ: Aqoonyahan Cabdullaahi Cali.